मेसीले किन छाडे बार्सिलोना ? - Deshko News Deshko News मेसीले किन छाडे बार्सिलोना ? - Deshko News
मेसीले किन छाडे बार्सिलोना ?
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका लागि सिजन सकिएको छ । प्रशिक्षक रोनाल्ड कोएमनले अर्जेन्टिनी खेलाडी लियोनल मेसीलाई सिजनको अन्तिम खेल अघि नै छुट्टीको अनुमति दिए ।
यो सँगै शनिबार हुने ला लिगाको अन्तिम खेलमा मेसी हुने छैनन् । उपाधि होडबाट बाहिरिसकेको बार्सिलोनाले आइतबार अन्तिम खेल खेल्दैछ । मेसीले यस सिजन धेरै खेल खेले । अन्तिम खेलअघिको आरामले मेसीलाई आफ्नै देशमा आयोजना हुने कोपा अमेरिका अघि केही समय छुट्टी मिलेको छ ।
सन् १९९३ यता कोपा अमेरिका जित्न नसकेको अर्जेन्टिनाका लागि यसपटक घरेलु मैदानमा ट्रफी जित्ने अवसर हुनेछ । यसैबीच मेसीले बार्सिलोनाका लागि खेलेको यसअघिको खेल नै अन्तिम हुन सक्छ । जसमा बार्सिलोना सेल्टाभिगोसँग पराजित भएको थियो ।
उनले सिजन सकिनुअघि आफ्नो भविष्यबारे निर्णय नहुँदै छुट्टी लिएका छन् । यसअघि मेसीले सिजन सकिएपछि भविष्यबारे निर्णय लिने बताएका थिए । अर्कोतिर मेसीका बुबा तथा एजेन्टले क्लबका अध्यक्ष जोन लापोर्टासँग अनौपचारिक कुराकानी गरेपनि कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन ।
कोएमनले समेत आफ्नो कप्तानको महत्व कति छ भनेर बारम्बार भन्दै आएका छन् । यस्तै लापोर्टा पनि मेसीलाई क्लबमै राख्न चाहन्छन् । नेमार र एर्लिङ हालाण्डलाई क्लब भित्र्याउने असफल प्रयास गरिरहेको बार्सिलोनाले मेसीकै अर्जेन्टिनी टिममेट सर्जियो अगुएरोलाई अनुबन्ध गर्ने तयारी गरेको छ ।
उनी मेसीको एकदमै मिल्ने साथी समेत हुन् । दुवैले उमेर समूहदेखि अर्जेन्टिनाका लागि सँगै खेल्दै आएका छन् । अहिले बार्सिलोनामा के हुन्छ भनेर पेरिस सेन्ट जर्मेन र म्यानचेष्टर सिटीको चासो धेरै रहेको छ ।
फ्रेन्च क्लब पेरिसले यसअघि नै मेसीलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ तर बार्सिलोनासँग छलफल नगरी अन्य क्लबसँग कुराकानी गर्न मन लगाएका छैनन् । क्लबको अवस्था बुझेर मात्र आफ्नो निर्णय लिने उनको सोच छ ।
यस्तै सिटी पनि मेसी बार्सिलोनामा बस्न चाँहदैनन् कि भनेर पर्खिरहेको छ । उनीहरुले प्रस्ताव तयार पारिसकेका छन्, तर सिटी मेसीको उपलब्धताबारे सुरुमा स्पष्ट हुन चाहन्छ ।
विश्वकप छनोटमा नेपाल विजयी
काठमाडौं, जेठ २१ विश्वकप २०२२ र एशियन कप २०२३, छनोट खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेइलाई हराएको
पहिलो एकदिवसीय खेलमा बंगलादेश विजयी
एजेन्सी, जेठ १० पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टिम बंगलादेशले श्रीलंकालाई पराजित गरेको छ । ढाकामा
मुख्यमन्त्रीले शाहीले भेटे दुर्व्यवहारमा परेकी राउटे किशोरी र परिवार
कर्णाली, जेठ २८ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यौन दुर्व्यवहारमा परेकी किशोरी र राउटे समुदायसँग
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार १४० कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौं, जेठ २८ काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार १४० कोरोना संक्रमित थपिएका छन्।
पछिल्लो २४ घण्टामा ५२२५ संक्रमित निको भए
काठमाडौं, जेठ २८ पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ५ हजार २२५ जना संक्रमित निको भएका छन्।